Wararka Maanta: Khamiis, Feb 12, 2009-Madaafiic lagu weeraray Dekedda Muqdisho oo Dhimasho iyo Dhaawac sababay
Madaafiicda Dekedda lagu weeraray oo qaarkood ay gudaha Dekedda ku dhaceen, qaar kalena ay ka gudbeen ayaa waxay hakad geliyeen dhaqdhaqaaqii Dekedda ka socday, gaar ahaan howlihii dejinta ahaa ee u socday Ganacsatada.
Xiliga Madaafiicda lagu weerarayay Dekedda Muqdisho ayaa waxaa Dekedda ku xirnaa Markab Qalab u sida Ciidamada AMISOM ee Muqdisho ku sugan, waxayna dad arkay qalabkaas ay sheegeen in uu qornaa magaca UN-ka, iyadoo ay xusid mudan tahay in qalabka la dejinayay uu isugu jiray Gaadiid iyo walxo kale oo Konteenarro ku qafilan.
Waa Markii ugu horeysay oo Madaafiic lagu weeraray Dekedda Muqdisho ay dhimasho geystaan, marka laga reebo in ay jireen dad ku dhaawacmay madaafiic Dekedda horay loogu weeraray. Ma jirto ilaa iyo haatan cid sheegatay in ay ka dambeysay madaafiicdaas Dekedda lagu garaacay.
Dekedda Muqdisho oo ay dib u howlgeliyeen Maxkamadihii Islaamka ee Muqdisho ka talinayay bartamihii 2006 kadib dhowr sano oo ay u xirneyd Hoggaamiye Kooxeedyadii Muqdisho ayaa waxaa labadii sano ee ugu dambeysay gacanta ku heysay Dowalddii TFG-da oo saraakiishii u qaabilsaneyd ay ilaa haatan ka shaqeeyaan.